आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘प्रहरी बलियो भएकैले घरबाहिर बम पड्काउन सकेनन्’
सोमबारकाे बन्द सफल पार्न झिसमिसेमै विस्फोट गर्ने योजना बनाएका विप्लव समूहका कार्यकर्ताले टाइमर मिलाउन नजान्दा अघिल्लो बेलुकी आइतबार नै विस्फोट भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । सोमबार बिहान ४:१५ मा विस्फोट गराउने गरी टाइम सेट गर्दा आइतबार बेलुका ४:१५ मा विस्फोट भएको प्रहरीको भनाइ छ । सुकेधारा र घट्टेकुलोमा एकैपटक विस्फोट भएको थियो । राजधानीका बिभिन्न ठाउँमा बम भेटिएका थिए । यस सम्बन्धमा आइजिपी सर्वेन्द्र खनालसँग नयाँ पत्रिकाले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
विप्लव समूहका हिंसात्मक घटना बढेका छन्, तर सूचना र सुरक्षामा प्रहरी कमजोर देखिएको छ । प्रहरीलाई सरकारको कस्तो निर्देशन छ ? तपाईंहरूको आफ्नै कस्तो योजना छ ?
शृंखलाबद्ध विस्फोटपछि गुप्तचर संयन्त्रमा प्रश्न उठेको छ नि ?
गुप्तचरकै कारण उनीहरूका सयौँ नेता र कार्यकर्ता पक्राउ गरेका छौँ । हिजो पनि कोटेश्वरमा कुकरसहित सातजना पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ । त्यसकारण गुप्तचर कमजोर भन्न मिल्दैन । प्रहरीले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेकै छन् । कमजोर भएका छैनन् । स्रोतसाधनको समस्याका बाबजुद प्रहरी आफ्नोतर्फबाट शान्तिसुरक्षा कायम गर्न लागिपरेकै छ ।